နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပီရူး သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Fernando Quiros Campos အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပီရူး သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Fernando Quiros Campos အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပီရူး သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Fernando Quiros Campos အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဇနျနဝါရီ 07, 2019 In: AppointmentNo Comments
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၇
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပီရူး သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Fernando Quiros Campos အား ယနေ့ ၁၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ပီရူးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်ခိုင်မာရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်သွားရန်နှင့် အားကစား၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှု တားဆီးရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများ အပါအဝင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ပီရူးသံအမတျကွီး H.E. Mr. Fernando Quiros Campos အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ပီရူး သံအမတျကွီး H.E. Mr. Fernando Quiros Campos အား ယနေ့ ၁၁ နာရီခှဲတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-ပီရူးနှဈနိုငျငံဆကျဆံရေး တိုးတကျခိုငျမာရေး၊ ပွညျသူအခငျြးခငျြး ဆကျဆံရေးတိုးမွှငျ့သှားရနျနှငျ့ အားကစား၊ စိုကျပြိုးရေး၊ ခရီးသှားလုပျငနျး၊ မူးယဈဆေးဝါး တရားမဝငျကုနျသှယျမှု တားဆီးရေးနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကဏ်ဍမြား အပါအဝငျ ကဏ်ဍပေါငျးစုံတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၁)၊ ၇-၁-၂၀၁၉
နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဂွေဇ – ဆန်းလွတ်ချက် တောင်ထိပ်လမ်းပိုင်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်